Shaqiri oo laga yaabo in laga reebo safka Liverpool ee booqanaya Red Star! Maxay tahay sababta. – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Shaqiri oo laga yaabo in laga reebo safka Liverpool ee booqanaya Red Star! Maxay tahay sababta.
Isniin, November, 5, 2018(HNN) Garabka kooxda Liverpool ee Xherdan Shaqiri ayaa ay u badantahay inuusan ka mid noqon doonin safka kooxda Liverpool ee u duulaya Serbia si ay ula soo ciyaaraan kooxda Red Star Belgarde.
Kullan ka tirsan Group-ka C ee tartanka Champions League ayay habeenka Talaadada ah Reds oo Group-kan hor kacaysa lasoo ciyaari doontaa Crevena Zvezda.
Macallinka Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa ka cabsi qaba in la bartilmaameedsado laacibkiisa Shaqiri, kaasoo aysan jecleyn taageerayaasha Serbian-ka ah.
27-jirkan ayaa ku dhashay Kosova, waxaana uu muujiyay dabaaldeg uu ku muujinayo dhalashadiisa asalka ah isagoo u ciyaaraya qaranka Switzerland koobkii adduunka, taasi waxa ay lid ku noqotay dadka reer Serbia.
Waayo Serbia uma aqoonsana Kosova inuu yahay dal madax bannaan, ficilkii Shaqiri-na waxa uu ahaa mid ay dhibsadeen dadka reer Serbia, iyadoo laga cabsi qabo kooxda Red Star taageerayaasheeda inay waxyeelleeyaan xiddiggan.
Taageerayaasha kooxda reer Serbia ayaa laga ganaaxay garoonka Anfield lugtii koowaad ee ay labadan kooxood ciyaaraan bishii lasoo dhaafay, inkastoo ay jireen tiro ku orrineysa Shaqiri marka uu kubadda taabto.
The Telegraph ayaa sheegeysa in Klopp uu ka fikirayo inuu ciyaaryahankan safarka kullankaas uu ka reebo, isagoo ka duullaya inay arrintu noqoto mid siyaasadeed.
Inkastoo aysan Liverpool ka fikireyn xaaladda ciyaaryahankan, haddane macallinka reer Germany ayaa u baqanaya xiddiggii hore ee Bayern Munich.
Mar uu Shaqiri qudhiisa ka hadlayay arrimahaas waxa uu sheegay in halkaas uu aadayo inuu ciyaaro kubadda cagta, hase ahaatee aysan ahayn dagaal siyaasadeed, waxaana uu hoosta ka xarriiqay inuusan qabin wax welwel ah.
Shaqiri oo laga yaabo in laga reebo safka Liverpool ee booqanaya Red Star! Maxay tahay sababta. added by admin on 05/11/2018